पहिलो भ्याक्सिन बनाउन हतार गर्नु रुसका लागि कति महँगो साबित होला ? « Postpati – News For All
एजेन्सी पढ्न लाग्ने समय : ६ मिनेट
भदौ ८, काठमाडौँ । पहिलो भ्याक्सिन बनाउन हतार गर्नु रुसका लागि कति महँगो साबित होला ? जब रुसले ११ अगस्टमा कोभिड–१९ को पहिलो भ्याक्सिन बनाएको घोषणा गर्यो र नाम स्पुतनिक राखियो तब त्यस पछाडिको सन्देशलाई नजरअन्दाज गर्न त्यति सजिलो थिएन ।
सन् १९५७ मा सोभियत रुसले स्पुतनिक सेटलाइट लञ्च गरेको थियो र अन्तरिक्षको क्षेत्रमा आफ्नो झण्डा बलियो बनाएको थियो । अब रुसले स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा पनि यस्तै महारथ हासिल गरिरहेको बताइरहेको छ ।
तर आलोचकले यसमाथि शंका जताइरहेका छन् र यो रुसले भने जत्तिको सजिलो नभएको बताइरहेका छन् । जुन शंकासहित यो भ्याक्सिन घोषणा गरिएको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलिरहेको भीषण प्रतिस्पर्धालाई दर्साउँछ । यो प्रतिस्पर्धामा ‘भ्याक्सिन राष्ट्रवाद’ को बहसका बीच शर्टकट्स, जासुसी, अनैतिक जोखिम र इर्ष्र्याजस्ता आरोप पनि लागिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ को भ्याक्सिन मेडिसिन क्षेत्रका लागि ठूलो वरदान साबित हुनेछ किनभने यसले मानिसहरुको ज्यान मात्रै बचाउँदैन यसले संसारमा पैदा भएको संकट समाप्त गर्न मद्दत गर्छ र यसमा सफल हुने मानिसहरुले एक विजेताको गौरव पनि हासिल गर्नेछन् ।
अमेरिकाका जर्जटाउन युनिभर्सिटीमा ग्लोबल हेल्थ लका प्राध्यापक लोरेन्स गास्टिनले उनले कहिले पनि कुनै मेडिकल उत्पादनमाथि यस्तो प्रकारको गम्भीर राजनीतिक दाउ लागेको नदेखेको बताएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘कोभिड–१९ को भ्याक्सिनको विषयमा यस प्रकारको राजनीतिक प्रतिकवाद यसकारण छ किनभने संसारका सुपरपावर यो भ्याक्सिनलाई आफ्नो वैज्ञानिक प्रगतिको रुपमा पेश गर्न लागीपरेका छन् जुन वास्तवमा आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थालाई श्रेष्ठ बताउने एक कोसिस हो ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार करिब आधा दर्जन उम्मेद्वार ट्रायलको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यसमध्ये तीन चीन, एक ब्रिटेन, एक अमेरिका र एक जर्मनी–अमेरिकाको साझेदारको रुपमा छन् ।
साधारणतया कुनै भ्याक्सिन बनाउन थुप्रै वर्ष लाग्न सक्छ तर अहिले सबै दाबेदार यो प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न लागीपरेका छन् । रुसको तर्फबाट स्पुतनिकको रजिस्ट्रेशनले साधारण प्रक्रियालाई शर्टकट गर्दा चिन्ता बढाइदिएको छ ।
जुलाईमा बेलायत, अमेरिका र क्यानडाले रुसको जासुसी एजेन्सीमाथि भ्याक्सिनको रिसर्चलाई ह्याक गरेको आरोप लगाएका थिए । यद्यपि, रुसले यसको खण्डन गरेको थियो । त्यसपछिको हप्तामा अमेरिकी न्याय विभागले दुई चिनियाँ ह्याकरमाथि भ्याक्सिन सम्बन्धि जानकारी चोरेको आरोप लगाएको थियो । यी चिनियाँ ह्याकरमाथि चीनको इन्टेलिजेन्स सर्भिसको तर्फबाट यस्तो काम गरेको आरोप थियो । चीनले पनि यो आरोप अस्विकार गरेको थियो । मेडिकल टेस्टिङको प्रक्रिया सुस्त हुँदा अहिले संसारभरीको चिन्ता बढेको छ ।
विदेशी सम्बन्धको परिषदमा ग्लोबल हेल्थ प्रोग्रामका निर्देशक थोमर बोलिकीले भनेका छन्, ‘निश्चित रुपमा छोटकरी बाटो अपनाइँदैछ र विशेषगरी रुसको विषयमा यो किटान गरेर भन्न सकिन्छ । भ्याक्सिन बनाउनु कुनै गाह्रो काम होइन तर यो सुरक्षित र प्रभावकारी छ भनेर प्रमाणित गर्नु गाह्रो काम हो । तर यदि देशको रुची भ्याक्सिन बनाउनुमा मात्रै छ भने उनीहरु छोटकरी बाटो अपनाउन सक्छन् ।’
रुसको अन्तिम चरणको परीक्षण बिना र ठूलो परिमाणमा परीक्षण नगरिकनै भ्याक्सिन रजिस्टर गराउने निर्णयमाथि पश्चिमका देशमा निकै आलोचना भइरहेको छ । अमेरिकामा बनाइएको कोरोनाभाइरस टास्कफोर्सका एक महत्वपूर्ण सदस्य डाक्टर एन्थोनी फाउचीले रुसको भ्याक्सिनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी हुने बारे आफ्नो गहिरो शंका जताएका छन् । यता रुसले भने यी आलोचनालाई ‘इर्ष्या’ बताउँदै खारेज गरिदिएको छ ।
भ्याक्सिन विकसित गर्नेहरुले आफूले चाँडै नै यो भ्याक्सिनसँग जोडिएको डाटा अन्तरराष्ट्रिय म्यागजिनमा छाप्ने बताएका छन् ।
यसैबीच चीनले पनि आफ्नो प्रयासलाई तीब्र पार्योः
भ्याक्सिनविरुद्ध अभियान चलाउनेहरुलाई मौकाः
बोलिकी भन्छन्, ‘यसमार्फत् केही देश विशेषरुपमा प्रतिस्पर्धी भएका छन् र आफ्नो देशभित्र उनीहरु महामारीको समयसँग कसरी जुधिरहेका छन् भन्ने अवधारणालाई बलियो बनाउन तल्लीन छन् ।’ अमेरिकामा यो वर्ष चुनाव हुँदैछ । यसका लागि ट्रम्प प्रशासन निकै दबाबमा छ ।
थोमस बोलिकी भन्छन्, ‘पश्चिमी देशबीच निश्चित रुपमा भ्याक्सिन राष्ट्रवाद हो । यसलाई तपाईंले ब्रिटेन र अमेरिकामा भ्याक्सिनको सुरुवाती खुराकलाई आफ्नो देशका लागि सुरक्षित राख्न अपनाइएको नीति हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ ।’
यो कुरा साँचो हो कि राष्ट्रवादको उदय कोरोनाभाइरसको सुरुवात हुनुअघि नै सुरु भइसकेको थियो । तर यो रोगले त्यसलाई बलियो बनाइदिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका मुखियाले १८ अगस्टमा पुनः ग्लोबल प्रोग्राम जोइन गर्न अपिल गरेका छन् । यसमार्फत् धनी देशलाई भ्याक्सिन बनेपछि गरिब देशलाई प्रदान गर्नका लागि बाटो खुल्ने डब्ल्यूएचओले अनुमान गरेको छ ।
उनले भने, ‘हामीले भ्याक्सिन राष्ट्रवादलाई रोक्न आवश्यक छ ।’ भ्याक्सिनको प्रयोग अन्य देशको समर्थन पाउनका लागि कुटनीतिक सम्बन्धको एक साधनको रुपमा पनि गर्न सकिन्छ ।
बोलिकी मान्छन्, ‘हरेक सरकारले केही सुरुवाती खेप कुटनीतिक सम्बन्धमा प्रयोगका लागि राख्न सक्छन् ।’
२०७७ भाद्र ८,सोमबार को दिन प्रकाशित
अमेरिकामा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या २ लाख नाघ्यो
चीनले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन डिसेम्बरबाट बजारमा आउने, भ्याक्सिनको मूल्य कति पर्छ नेपालमा ?
कोरोना फैलिनुमा कुन उमेर समुहका मान्छेको छ हात ?